China HEPA Mhepo Yekuchenesa Mhepo Yekuchenesa Yakasarudzika Manufacture uye Fekitori | Kennede
Dzivirira Hutano Hwako: Yedu HEPA mhepo yekuchenesa ine inoshanda sefita sisitimu ine simba rakakwana kubata mukume, utsi, hwema uye pet dander. Inogona kusefa zvidimbu zvidiki se 0.3 microns uye PM 2.5, inogona kuita kuti mweya utenderere kashanu mumaminitsi makumi matatu munzvimbo yemukati ye215 square tsoka (20 cubic metres).
Mhepo Pretreatment System: Isu tinonyatsonzwisisa zvinokunetsa, uye takaita zvisingaverengeki kuyedza pamhepo yedu pretreatment system.
Kuburikidza nemiedzo, takaona kuti chero bedzi ultraviolet wavelength yakakura kupfuura 200nm, hapana zvinhu zvinokuvadza zvichagadzirwa.
Bhadhara Mabhiri eMagetsi Mashoma: Mukufunga nezve kuchengetedza simba uye kudzikisa mabhiri emagetsi, yedu yekuchenesa ine basa rekuita nguva uye mhepo yekumhanyisa kugadzirisa basa. Iwe unogona kusarudza kuti imhanyi ipi uye kuti inguva yakadii yekuchenesa inomhanya zvinoenderana nemazano ako, ichideredza zvakanyanya mabhiri ako emagetsi.
Chenesa Chinyararire Mhepo Yaunofema:
Chiedza chehusiku chinogona kubatidzwa ON/OFF kuburikidza nekudzvanya bhatani. Inochenesa mweya wako uye inovhenekera nzira yako. Yakanaka kune yekurara yeusiku muimba yekurara kana patafura yepadivi.
Iwe unogona kufema mukati mezvibatsiro zvisina kukanganiswa paunenge wakarara.
Chigadzirwa saizi: 160mm * 171mm * 247mm
Kumhanya: 4 kumhanya kusarudzwa
Nguva: 1/4/8 maawa
Mhepo Mode: 4 mhepo modhi: yakakwirira, yepakati, yakaderera, kurara
Bata switch control: Simba, Fan kumhanya, Timer, Kurara Mode, Sefa Replacement chiratidzo, Chiedza.
Chiedza:Ambient Light Display
Bhokisi rezvinonhuwira: Hongu (inogona kuwedzera mafuta anokosha)
Kushandisa: Indoor air sterilization, Deodorizing, Airfreshening, H13 filter, Sleep mode
Saizi yekugadzira Φ160*247(mm)
Rpm High Speed: 2800rpm
Pakati Kumhanya: 2000rpm
Kurara Kumhanya: 800Rpm
Simba Hurefu 19W
Smart panel, nyore kubata
Nekunhuhwirira bhokisi, unogona kushandura kunhuwa kwaunoda
Iine HP13 fliter, iri nyore kuchinja
Zvakapfuura: KENNEDE brand air purifier yekushandisa Imba hombe kamuri